🥇 ▷ Google wuxuu yeelan doonaa barnaamijka 'Cake Portuguese' Cake app oo caruurta lagu bari doono sida wax loo akhriyo ✅
Google wuxuu yeelan doonaa barnaamijka ‘Cake Portuguese’ Cake app oo caruurta lagu bari doono sida wax loo akhriyo
Google waxay soo bandhigeysay Cake ilaa iyo May, waana barnaamij baraya carruurta wax akhrinta. Waxaa lagu soo saaray iyada oo diirada la saarayo carruurta ku nool India, waxay taageertay kaliya Ingiriisiga iyo Hindi. Hadda shirkadda ayaa shaaca ka qaaday in appku uu heli doono laba luqadood oo cusub: Boortaqiis iyo Isbaanish.
Cusboonaysiinta, oo la sii deyn doono bisha Sebtember, waxay ka dhigeysaa Cake mid faa iido u leh carruurta barata akhriska mid ka mid ah afarta luqadood ee dunida aad looga hadlo. Si loo muujiyo tillaabooyinka ugu horreeya ee akhriska, barnaamijku wuxuu leeyahay Diya, noocan oo ah macalin hagaya fasallada.
Waxay adeegsataa isla teknolojiyadda sida kaaliyaha Google si ay ula socoto akhrinta carruurta oo ka caawiso inay horumar sameeyaan. Marku shaki ku jiro, Diya wuxuu kuu sharixi karaa macnaha ereyada iftiimiyay shaashadda.
Cake waxay ku tiirsan tahay sheekooyinka iyo cayaaraha ereyada si loogu baro carruurta wax akhriska. Barnaamijku wuxuu isticmaalaa abaalmarinno qaali ah iyo stamps si khibradda looga dhigo mid ciyaar oo kale, maadaama ay u saamaxdo astaamo badan oo la abuuri karo, waxaa isticmaali kara in ka badan hal cunug isla aaladda.
Sida laga soo xigtay Google, baaritaanno lagu sameeyay India muddo seddex bilood ah ayaa muujinaya in 64% carruurta isticmaaleysa barnaamijka ay horumar ka sameeyeen aqrintooda. Tan iyo markii la bilaabay bishii Maarso, waxaa adeegsaday in ka badan 800,000 oo carruur ah oo aqriyay qiyaastii 3 milyan oo sheeko.
Shirkaddu waxay leedahay hadafka Cake ayaa ah inuu u dhaqmo sidii umeerin si uu u caawiyo ardayda markasta iyo meel kasta oo ay uga baahan yihiin. Sidaa darteed, dalabka waa bilaash, ma muujinayo xayeysiinta waxuuna ku shaqeyn karaa xitaa xiriir la’aan internet.
Faahfaahin: Google, Android Booliis.